PressReader - Ilanga: 2018-10-25 - INingizimu Afrika isenkingeni yezimali
INingizimu Afrika isenkingeni yezimali
Ilanga - 2018-10-25 - Izindaba - BONGINKOSI ZONDI bonginkosi@ilanganews.co.za
UGCIZELELE ukuthi isimo silokhu sisibi kwezemali uNgqongqoshe wezeMali, uMnu Tito Mboweni, ngesikhathi ethula isabelomali samaphakathi nonyaka,izolo ngoLwesithathu.
Lesi sabelo bekungesokuqala ukwethulwa nguMnu Mboweni njengoba engakaqedi nenyanga ekulesi sikhundla. Kule nkulumo wethembise ukuhlela kabusha isabelo ngokuthi kuhlomule kuso ngo-60% le minyango: owezempilo, owezemfundo nowezokuthuthukiswa komphakathi.
Uthe kuzomele iphele indaba yezindlu zangasese zomgodi ezikoleni, futhi luqhutshwe uhlelo lokuthumela imisubelo ( pads) yabafundi. Maqondana nezempilo, uthe u-R350 million uzotholakala ukuze kubhekwane nokuqashwa kochwe- pheshe bezempilo abawu-2 000 abadingekayo, no-R150 million wokuthengwa kwemibhede emisha nezingubo zokulala ezibhedlela ezizidingayo.
Kakubangakhona zinguquko ezitheni enkulumeni yesabelomali eyethulwe nguMnu Malusi Gigaba ngoNhlolanja (February), ngakho belu ukubheda kwesimo somnotho, okubuye kwenezelwa yinzikamnotho emhlabeni nokuba nte- kenteke kwamandla erandi.
Zisuka nje, weneke izinkinga leli zwe elibhekene nazo, okuwukwesweleka kwamathuba emisebenzi, ukwenyuka kwezindleko zikagesi nentengo kaphethiloli.
Maqondana nebhange iVBS, uMnu Mboweni wenze isiqiniseko kwabafake imali yabo ukuthi kunohlelo oselwenziwe lokuba bangalahlekelwa, engeza ngokuthi ngomasipala nalabo abanezabelo kuleli bhange abazolahlekelwa.
Ukhale ngokuthi kunezigaba zikahulumeni amandla azo okusebenza aphazamisekile, ikakhulukazi iSARS. Ubuye wathinta udaba lwamanzi athe ayisidingo esikhulu, eqagula nohlelo lwaseGiyani, eLimpopo athe lubishe echibini lenkohlakalo.
Wexwayise ngokuthi umnyango wakhe uzosebenzisana nowezokubusa ngokubambisana nezomdabu ekulweni nenkohlakalo eyenzeka kuyo yonke imikhakha kahulumeni, ethembisa nokuthi abathintekile kuleyo nkohlakalo kumele bavalelwe ejele emuva kokuqulwa kahle kwamacala abayokwethweswa wona.
Ubuye wakhumbuza asebekhohliwe ukuthi isigatshana 224 (2) somthethosisekelo wezwe sithi ibhange lombuso lingaphazanyiswa emshikashikeni walo wokulawula amandla emali, ngakho umphathi walo, uMnu Lesetja Kganyago nethimba lakhe bazoqhubeka nokwenza lo msebenzi.
Kuke kwavungama indlu lapho uMnu Mboweni ethinta uzozo omayelana nendaba ye-E-tolls, esho nokuthi ngokomgomo othi othola usizo kumele alukhokhele, ngakho kumele nawo akhokhelwe ukuze kubekhona imigwaqo emihle.